Umsebenzi Wethu - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
E-Huasheng, inkampani nabantu ngabanye banomsebenzi wokwenza izinto ngendlela ezuzisa imvelo yethu kanye nomphakathi wonkana.Kithina, kubaluleke kakhulu ukufuna ibhizinisi elingagcini nje ngokwenza inzuzo kodwa elifaka isandla enhlalakahleni yomphakathi kanye nemvelo.
Kusukela ekusekelweni kwenkampani ngo-2004, i-Huasheng umthwalo wemfanelo wabantu, umphakathi kanye nemvelo ubambe iqhaza elibaluleke kakhulu, elihlale likhathaza kakhulu umsunguli wenkampani yethu.
Vikela imisebenzi/ukufunda impilo yonke/Umndeni kanye Nomsebenzi/Impilo Enempilo futhi ulungele ukuya kumhlalaphansi.Kwa-Huasheng, sibeka inani elikhethekile kubantu.Abasebenzi bethu yibo abasenza sibe inkampani eqinile, siphathana ngenhlonipho, ukwazisa, nokubekezela.Ukugxila kwethu okuhlukile kwamakhasimende kanye nokukhula kwenkampani yethu kwenziwa kwenzeke kuphela ngesisekelo.
Izindwangu ezigaywe kabusha / Izinto zokupakisha ezemvelo/ Izinto zokuhamba eziphumelelayo
Ukuze sibe negalelo emvelweni futhi sivikele izimo zokuphila zemvelo, sisebenzisana namakhasimende ethu ukuze asebenzise imicu evumelana nomhlaba, njenge-polyester egaywe kabusha yekhwalithi ephezulu eyenziwe ngamabhodlela epulasitiki nezinto ezisetshenziswa ngemuva kokuthenga.
Asithande imvelo.Masenze indwangu i-Eco-friendly.